China Batching Chisanganiso Spare Zvikamu Kugadzira uye Fekitori Jusheng
Concrete chisanganiso Spare Zvikamu
Sicoma Spare Zvikamu
Iyo inodedera sarudza yepasi rose zvinhu, Kirasi F kuputira, kusimbisa chisimbiso, ine premium inobereka, yakasimba muviri dhizaini. Isu tinonyanya kusarudzaOLI-WOLONG kana DKTEC vibratory kuunza iyo vibration kune jecha batching bin
Isu tinonyanya kusarudza AIRTAC pneumatic cylinder pamwe chete nevharuvhu solenoid
SC100X200 & SAU100X200 inonyanya kushandiswa. SC mhando humburumbira nderwe AIRTAC standard chigadzirwa
Kushanda Tembiricha ℃
Iyo humburumbira ichafananidzwa neiyo inoenderana hwaro, chinongedzo uye sensor yekudzora yekumhanyisa kumhanya kwemabatiro muchina uye kuwedzera iko iko kwehuremu. Iyo inoenderana yekudzora bhokisi ATC3006-DC24V, iine akawanda maseti e solenoid mavharuvhu 4V310, firita BFC4000, mhepo pombi Uye silencer, nezvimwe.
AMCELL, CHIMEI ndiye chiratidzo chedu chikuru. Kune musanganiswa unosanganisa, kunyanya sarudza S mhando mutoro wesero. 4units ane chinokwana 3000kg, akaisirwa muyero hopper kuti ave nechokwadi chechokwadi. Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, isu tinogona zvakare kupa PT650D yekuyera chiratidzo, kuitira kuti vatengi vakwanise kuona intuitively data rinorema.
Otomatiki Aggregate Batching System, Concrete chisanganiso Spare Zvikamu, Aggregate Batching Dosing Sisitimu, Automaticaggregate Batching Fertilizer Chisanganiso, Otomatiki Aggregate Batching Machine, Aggregate Batching System,